ပေါက်ခေါင်းမြို့နေပြည်သူများ အားလုံး ကို အိမ်မှာပဲ (၁၄)ရက် နေထိုင်ကြဖို့ တိုင်း အစိုးရ ညွှန်ကြား – Na Pann San
ပေါက်ခေါင်းမြို့နေပြည်သူများ အားလုံး ကို အိမ်မှာပဲ (၁၄)ရက် နေထိုင်ကြဖို့ တိုင်း အစိုးရ ညွှန်ကြား
လူနာ( ၄ ) ဦးလုံး ကိုတော့ ပြည်ဆေးရုံကြီးကိုပို့ဆောင်ထား ပါတယ်….
ပေါက် ခေါင်းမြို့ မှာ နေထိုင် တဲ့ အတည်ပြုလူနာ နံပါတ်( ၁၅ )ရဲ့ မိသားစုဝင် ( ၄ ) ဦးလုံး မှာ ရောဂါပိုးတွေ့ရှိပြီးနောက် ပေါက်ခေါင်းမြို့မှာ ဈေးတွေ နဲ့ ကား လိုင်းတွေ ကို ပိတ်ထားပြီး မြို့သူမြို့သားတွေ ကို လည်း နေအိမ်တွေမှာ နေထိုင်ကြဖို့ ညွှန်ကြားထားတယ် လို့ သိရ ပါ တယ် ။
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပေါက်ခေါင်းမြို့ မှာ မိသားစုလိုက် Covid-19 ရောဂါပိုးတွေ့ရှိပြီးနောက်မှာတော့ ပေါက်ခေါင်းမြို့နေထိုင်သူအားလုံးကို (၁၄)ရက်အတွင်း အသွားအလာလျှော့ကာ နေအိမ်မှာ ပဲနေထိုင်ကြဖို့ သတိပေး ညွှန်ကြားထားတယ်လို့ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ထံမှ သိရပါတယ်။ ရောဂါပိုးတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ မိသားစုဝင် လေးဦးလုံးကိုတော့ ညတွင်းချင်း ပြည်ဆေးရုံကို ပို့ဆောင်ပြီး ပြည် ဆေးရုံကြီးမှာပဲ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေလုပ်သွားမယ်လို့ ပေါက်ခေါင်းမြို့ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်( ၂ )မှ ဦးဝင်းနိုင်က Duwun ကိုပြော ပါတယ် ။
“ ကျွန်တော်တို့မြို့မှာ မိသားစုဝင်လိုက် ရောဂါပိုးတွေ့ရှိတယ်ဆိုတော့ အားလုံးကလည်းစိုးရိမ်မှုတွေရှိတာပေါ့၊ မြို့သူမြို့သားတွေကိုလည်း နေအိမ်မှာပဲ နေထိုင်ကြဖို့ ညွှန်ကြားထားပါတယ်။ ဈေးတွေလည်းပိတ်ထားပြီ။ ပြည်- ပေါက်ခေါင်းကားလိုင်းတွေ၊ ပြီးတော့ ရန်ကုန်ကနေလာတဲ့ ကားလိုင်းတွေကိုလည်းပိတ်ထားပြီ” လို့ ဦးဝင်းနိုင်က ပြောပါတယ်။
ပေါက်ခေါင်းက လူနာလေးဦးဟာ ရန်ကုန် International SOS ဆေးခန်းမှ ဝန်ထမ်းဖြစ်သူ အတည်ပြု လူနာ နံပတ်(၁၅)ရဲ့ မိသားစုဝင်တွေဖြစ်ပြီး ခင်ပွန်း၊ သား၊ သမီးနဲ့ တူမတို့ကို ကူးစက်ခဲ့တာပါ။ ခင်ပွန်းဖြစ်သူဟာ ပေါက်ခေါင်းမြို့ရဲ့ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဖြစ်ပြီး ရောဂါပိုးမတွေ့ရှိခင် ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းကမှ ရပ်မိရပ်ဖတွေနဲ့ အစည်းအဝေးတစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
လက်ရှိမှာတော့ အဆိုပါအစည်းအဝေးမှာ လူနာနဲ့ အနီးကပ်ထိတွေ့ခဲ့သူ (၂၀)ဦးလောက်ကို ပေါက်ခေါင်းမြို့ အထက ကျောင်းမှာ Facility Quarantine လုပ်ထားပြီး ကျန်အစည်းအဝေးတက်ရောက်ခဲ့သူတွေကိုလည်း Home Quarantine လုပ်ထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
လူနာ( ၄ ) ဦးလုံး ကိုတော့ ပွညျဆေးရုံကွီးကိုပို့ဆောငျထား ပါတယျ….
ပေါကျ ခေါငျးမွို့ မှာ နထေိုငျ တဲ့ အတညျပွုလူနာ နံပါတျ( ၁၅ )ရဲ့ မိသားစုဝငျ ( ၄ ) ဦးလုံး မှာ ရောဂါပိုးတှရှေိ့ပွီးနောကျ ပေါကျခေါငျးမွို့မှာ ဈေးတှေ နဲ့ ကား လိုငျးတှေ ကို ပိတျထားပွီး မွို့သူမွို့သားတှေ ကို လညျး နအေိမျတှမှော နထေိုငျကွဖို့ ညှနျကွားထားတယျ လို့ သိရ ပါ တယျ ။
ပဲခူးတိုငျးဒသေကွီး၊ ပေါကျခေါငျးမွို့ မှာ မိသားစုလိုကျ Covid-19 ရောဂါပိုးတှရှေိ့ပွီးနောကျမှာတော့ ပေါကျခေါငျးမွို့နထေိုငျသူအားလုံးကို (၁၄)ရကျအတှငျး အသှားအလာလြှော့ကာ နအေိမျမှာ ပဲနထေိုငျကွဖို့ သတိပေး ညှနျကွားထားတယျလို့ ပွညျနယျလှတျတျောကိုယျစားလှယျထံမှ သိရပါတယျ။ ရောဂါပိုးတှရှေိ့ခဲ့တဲ့ မိသားစုဝငျ လေးဦးလုံးကိုတော့ ညတှငျးခငျြး ပွညျဆေးရုံကို ပို့ဆောငျပွီး ပွညျ ဆေးရုံကွီးမှာပဲ ကနျြးမာရေးစောငျ့ရှောကျမှုတှလေုပျသှားမယျလို့ ပေါကျခေါငျးမွို့ ပွညျနယျလှတျတျောကိုယျစားလှယျ မဲဆန်ဒနယျ အမှတျ( ၂ )မှ ဦးဝငျးနိုငျက Duwun ကိုပွော ပါတယျ ။
“ ကြှနျတျောတို့မွို့မှာ မိသားစုဝငျလိုကျ ရောဂါပိုးတှရှေိ့တယျဆိုတော့ အားလုံးကလညျးစိုးရိမျမှုတှရှေိတာပေါ့၊ မွို့သူမွို့သားတှကေိုလညျး နအေိမျမှာပဲ နထေိုငျကွဖို့ ညှနျကွားထားပါတယျ။ ဈေးတှလေညျးပိတျထားပွီ။ ပွညျ- ပေါကျခေါငျးကားလိုငျးတှေ၊ ပွီးတော့ ရနျကုနျကနလောတဲ့ ကားလိုငျးတှကေိုလညျးပိတျထားပွီ” လို့ ဦးဝငျးနိုငျက ပွောပါတယျ။
ပေါကျခေါငျးက လူနာလေးဦးဟာ ရနျကုနျ International SOS ဆေးခနျးမှ ဝနျထမျးဖွဈသူ အတညျပွု လူနာ နံပတျ(၁၅)ရဲ့ မိသားစုဝငျတှဖွေဈပွီး ခငျပှနျး၊ သား၊ သမီးနဲ့ တူမတို့ကို ကူးစကျခဲ့တာပါ။ ခငျပှနျးဖွဈသူဟာ ပေါကျခေါငျးမွို့ရဲ့ မွို့နယျအုပျခြုပျရေးမှူးဖွဈပွီး ရောဂါပိုးမတှရှေိ့ခငျ ပွီးခဲ့တဲ့ ရကျပိုငျးကမှ ရပျမိရပျဖတှနေဲ့ အစညျးအဝေးတဈခုကိုပွုလုပျခဲ့တယျလို့ သိရပါတယျ။
လကျရှိမှာတော့ အဆိုပါအစညျးအဝေးမှာ လူနာနဲ့ အနီးကပျထိတှခေဲ့သူ (၂၀)ဦးလောကျကို ပေါကျခေါငျးမွို့ အထက ကြောငျးမှာ Facility Quarantine လုပျထားပွီး ကနျြအစညျးအဝေးတကျရောကျခဲ့သူတှကေိုလညျး Home Quarantine လုပျထားတယျလို့ သိရပါတယျ။
၀ဇီဗေဒ ထိတိုင်းရှ….သားအမိအရင်းကိုမှ ပေးစားရက်လေခြင်း ….
အသစ်တွေ့ လူနာနံပါတ်(၁၄၅) မှာ သီတဂူဆရာတော်၏ ကူညီပေးမှုဖြင့် အိန္ဒိယမှ ပြန်လာသူဖြစ်,(၁၄၆) မှာ Pan Pacific မှ လူနာအမှတ်(၁၃၉) ၏ ခင်ပွန်းဖြစ်
၁ ရက် အတွင်း ဓာတ်ခွဲနမူနာ ၁ ထောင်ကျော်ဖြင့် စံချိန်တင်စစ်ဆေး မြန်မာ ပြည်တွင်း၌ အချင်းချင်း ကူးစက်မှုမရှိသည် မှာ (၁၀) ရက်ပြည့်ပြီဖြစ်